SEO PowerSuite: Fomba haingana 5 hahazoana valiny amin'ireo tompona tranokala be olona | Martech Zone
SEO PowerSuite: Fomba haingana 5 hahazoana vokatra ho an'ny tompona tranokala sahirana
Asabotsy, Jona 18, 2016 Alatsinainy Oktobra 18, 2021 Aleh Barysevich
Ny marketing nomerika dia lafiny marketing izay tsy azonao odian-tsy fantatra fotsiny - ary ny fotony dia ny SEO. Fantatrao angamba ny fiantraikan'ny paikady SEO tsara amin'ny marikao, fa amin'ny maha mpivarotra na tompona tranokala anao dia matetika any an-kafa no ifantohanao ary ny fanaovana SEO ho laharam-pahamehana dia mety ho sarotra. Ny vahaolana dia ny fampiasana rindrambaiko marketing dizitaly izay malefaka, manan-karena ary mahomby be.
Midira SEO PowerSuite - repertoire feno fitaovana noforonina mba hampitomboana ny SEO anao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantarinay fomba dimy ahafahanao mampiasa SEO PowerSuite hampisondrotra ny SEO ny marikao.
Hamarino tsara fa mahita ianao
Raha tianao ho voatanisa sy voalahatra am-pahombiazana ny tranokalanao dia zava-dehibe ny hamorana azy ho mora araka izay tratran'ny Google mandady ny tranokalanao sy hahita ny atiny. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ny firafitry ny tranokala dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanoratana. Tsotra fotsiny, tranonkala miaraka amina firafitra lojika dia mora kokoa amin'ny mpikaroka mikaroka sy milahatra.
Amin'ny fampiasana SEO PowerSuite, azonao atao ny mamaritra ny kalitaon'ny firafitry ny tranokalanao. Ny anton-javatra isan-karazany dia miditra an-tsehatra - ohatra, ny pejy manan-danja dia tokony ho azo avy amin'ny pejin-trano, ary ny lahatsoratra bilaogy dia tokony hifandray amin'izy ireo rehefa mifanaraka amin'ny teny manodidina. Azonao atao ny mampiasa SEO PowerSuite's WebSite Auditor hanamarina ireo zavatra ireo.
Mandehana fotsiny amin'ny fitaovana Auditor WebSite, ary kitiho ny Pages faritra. Avy eo, jereo ny Rohy anatiny mankany amin'ny pejy tsanganana hahitana izay pejy amin'ny tranokalanao tsy misy rohy anatiny manondro azy ireo.
Izany dia hanome anao lisitr'ireo lahatsoratra sy pejy azo ampiharina izay tokony hahitanao fomba hifandraisana amin'ny faritra hafa amin'ny tranokalanao.
Hamarino tsara fa miverina faingana ny pejy lozisialy misy anao
Ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala dia misy fiatraikany lehibe amin'ny laharana noho ny antony roa:
Ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala dia singa iray, midika izany fa ny tranonkala miadana mazàna ambany toerana.
Ny hafainganam-pandehan'ny tranokalanao dia misy fiatraikany mivantana amin'ny taha tahan'ny fitomboana.
Google sy ny motera fikarohana hafa dia manome lanja lehibe an'ireo famantarana ny traikefan'ny mpampiasa. Ny fambara iray toy izany dia ny tahan'ny fihenam-bidy, izay mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala - segondra vitsy (farafaharatsiny) miandry ny tranokala vao mavesatra ny ankamaroan'ny olona vao mivoaka.
Amin'ny fampiasana Auditor WebSite, azonao atao ny mamantatra ireo pejy ao amin'ny tranonkalanao misosa miadana. Tsidiho ny Fanaraha-maso ny pejy Module an'ny fitaovana Auditor an'ny tranonkala, ary zahao ny fizarana hafainganam-pandehan'ny pejy hahitana raha mandalo ny fitsapana hafainganam-pandehan'i Google ny pejyo:
Rehefa fantatrao hoe iza amin'ireo pejy no mandeha miadana dia afaka manao dingana ianao hanitsiana ireo olana.
Zahao ny loza mety hitranga amin'ny fanasaziana
Ny rohy ambany kalitao dia mety hampidi-doza ny sazinao amin'ny sazy Google, izay amin'ny SEO, no nofy ratsy indrindra nataonao. Raha te hisoroka ny sazy avy amin'i Google ianao dia mila mahay mamantatra rohy mampidi-doza ary mandray fepetra hanefena azy ireo.
miaraka SEO PowerSuite's SEO SpyGlass, azonao atao ny mamantatra avy hatrany rohy manimba ao amin'ny mombamomba ny backlink anao ary manakana ny sazin'ny rohy Google.
Ny hany ilainao atao dia ny mandeha any amin'ny fitaovana SEO SpyGlass ary miditra amin'ny sehatry ny tranokalanao. Avy eo, mandehana mankany amin'ny takelaka Link Penalty ary kitiho ny fizarana Backlinks, izay hita eo amin'ny ilany ankavia. Any ianao dia afaka miditra amin'ny antontan'isa tena ilaina, anisan'izany ny 'risika sazy' ho an'ny sehatra misy anao.
Ity ambany ity ny fitsapana haingana ho an'ny Martech Zone. Araka ny hitanao dia zara raha misy risika amin'ny sazy, vita tsara!
Ny tsara indrindra dia azonao atao ny manamarina ny loza mety hitranga amin'ny rohy amin'ny tsindry iray monja. Noho izany, na ho an'ny rohy isam-batan'olona na vondron-tsolika dia azonao atao ny mahita ny loza mety hitranga amin'ny sazy amin'ny fikitihana bokotra iray.
Manaova fitsapana momba ny fisakaizana amin'ny finday
Rehefa manomboka mifanandrify amin'ny isan'ny fikarohana ao amin'ny birao ny fikarohana finday, lasa mpiorina kely amin'ny Google sy ny motera fikarohana hafa ny fisakaizana amin'ny finday. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha tsy nohamarinina ho an'ny finday ny tranokalanao dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny laharanao io (tsy lazaina intsony ny zava-niainan'ny mpampiasa).
Azonao atao ny mampiasa WebSite Auditor hanatontosa fitsapana mahasoa amin'ny finday ao amin'ny tranonkalanao, hijerena raha toa ka mandany ny fenitra Google. Raha tsy mandalo ny fitsapana ny tranokalanao, dia hahazo torohevitra momba ny fanaovana ny tranokalanao ho voatsara kokoa amin'ny finday ianao - ohatra, ny mpamaky dia tsy tokony hanao zoom na handehandeha amin'ny findainy hamakiana ny atin'ny pejyo.
Mandehana any amin'ny Site audit fizarana amin'ny fitaovana Auditor WebSite hijerena ny tranokalanao.
Raha tsy mahazo isa tsara ny tranokalanao, ny vahaolana tsara indrindra dia ny fanavaozana ny tranokalanao mba handraisana andraikitra (raha mbola tsy izany). Ny fampiasam-bola amin'ny famolavolana - indrindra ny famolavolana finday - dia afaka mandoa dividends amin'ny valin'ny SEO.
Manaova fanaraha-maso ny tranokala
Mety hisy olana goavana amin'ny tranokalanao izay tsy fantatrao tsotra izao, na tsy manam-potoana hamaritana ny tenanao. Mety hisy fiantraikany amin'ny fahefan'ny tranokalanao sy ny laharanao izany. Miaraka amin'ny SEO PowerSuite, manana fidirana amin'ny fitaovana ianao, toy ny Site audit fitaovana, izay afaka mamaritra ny olana lehibe rehetra eo amin'ny tranokalanao.
Mba hanatanterahana ny fanaraha-maso tanteraka ny tranokala, sokafy ny fampiharana WebSite Auditor, ary atombohy ny scan ny tranokalanao amin'ny fampiasana ny Site audit Fitaovana:
Ity fitaovana ity dia mamantatra ho azy ny olana ara-teknika mety hampihena ny filahanao, mampianatra anao ny fomba fanamboarana olana ary hampahafantatra anao ny olana eo amin'ny pejy. Tena mahery vaika izany.
SEO dia misy fiatraikany lehibe eo amin'ny marikao, ka sarotra ny tsy hiraharaha azy. Na izany aza, raha sahirana ianao manao laharam-pahamehana ny fanentanana SEO anao, dia zahao ny arsenalin'ny SEO PowerSuite misy fitaovana mahomby.
Manamora ny fizotry ny SEO izy ireo, manamora kokoa sy haingana kokoa anao hamantatra ireo olana mety hitranga amin'ny tranokalanao, ary afaka manampy anao amin'ny farany avo lenta ny toerana misy ny tranokalanao.
Ny fampiasana SEO PowerSuite dia azonao atao
Hamarino tsara fa ny tranokalanao dia voarindra tsara
Zahao hoe ny tranonkalanao faingana haingana
Zahao ny tranokalanao loza mety hitranga amin'ny penalty
Run a fitiavana namana fitsapana
Manaova a fanaraha-maso ny tranonkala feno
Raha ny zava-misy dia nokasihintsika fotsiny ny tendron'ny volkano tamin'ity lahatsoratra ity, saingy tokony ho ampy ho anao ny voalaza etsy ambony! Ianao dia afaka misintona SEO PowerSuite maimaim-poana ao amin'ny tranokalanay ofisialy.
Sintomy maimaim-poana ny SEO PowerSuite!
Disclosure: Martech Zone dia mampiasa azy SEO Powersuite rohy mpiara-miasa ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: audit auditloza mety hitranga amin'ny penaltyrisika rohyfitiavana namanafitsapana findaypoweruitefikarohana OptimizationSEOfampielezana seoseo powersuiteseo firafitrafanaraha-maso ny tranokalampanamarin-tranonkalahafainganam-pandehan'ny tranokala
Aleh Barysevich dia mpanorina sy Lehiben'ny Marketing Marketing ao amin'ny orinasa ao ambadiky ny SEO PowerSuite, rindrambaiko matihanina amin'ny fampielezan-kevitra SEO mandritra ny fotoana feno, ary Awario, media sosialy ary fitaovana fanaraha-maso tranonkala. Izy dia manam-pahaizana momba ny SEO efa za-draharaha sy mpandahateny amin'ny kaonferansa indostrialy lehibe, ao anatin'izany ny SMX sy BrightonSEO.
Ahoana ny fomba hametrahana ny fantsona Youtube anao ary hanorotoro azy!
Ahoana ny fomba hampihenana ny fiantraikan'ny fikarohana rehefa mifindra amin'ny sehatra vaovao
Jun 26, 2016 ao amin'ny 11: 25 PM
Ny andalana voalohany dia tena tonga ao an-trano. Ny tompona orinasa dia sahirana amin'ny fampandehanana ny orinasa ary ny mpivarotra dia variana amin'ny fitazonana ireo orinasa ireo. Izy rehetra dia manana raharaha maika hatrehina matetika fa tsy laharam-pahamehana SEO. Ny fifantohana amin'izany dia tena sarotra ary ireo fomba nozarainao ireo dia tena manampy tokoa ho an'ireo izay nanokana fotoana kely ho an'ny SEO nefa mbola maniry ny teniny amin'ny laharana ambony.
22 Novambra 2016 à 6:06
Mba hanamafisana fotsiny ny maha-zava-dehibe ny fotoana fandefasana entana, rehefa manindry rohy ny olona, ​​dia hiandry dimy segondra eo ho eo izy ireo vao hiseho araka ny tokony ho izy ilay pejy vao manindry ny bokotra miverina amin'ny navigateur ary manandrana ny vintana amin'ny valin'ny fikarohana hafa! Ataovy tsotra araka izay azo atao ny tranokalanao ary tsy misy Flash!